အခန်းဆက်များ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 17
…………….. ……….. မြန်မာပြည်က ရွှေနှင့်မူးယစ်ဆေးတို့၏ ၀ိရောဓိ နေသွင် မေ ၂၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်က အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ စံပယ်နေတဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်ကြည်ညိုဖို့ တနှစ်တနှစ်မှာ ရောက်လာကြတဲ့ ဘုရားဖူးပရိသတ်လူတွေက မနည်းပါဘူး။ ရွှေတိဂုံ ဘုရားကြီးက ဉာဏ်တော်အမြင့် ၈၈ မီတာရှိပြီး၊ ဘုရားကို ရွှေချထားတဲ့၊ ရွှေစင်ရွှေပြားရဲ့အလေးချိန်က မက်ထရစ်တန်ချိန်အနေနဲ့ ၃ တန် ရှိပါတယ်။ ဂျပန်ပြည် ကျိုတိုမှာရှိတဲ့ ကင်ကာကူဂျီဘုရားကျောင်းမှာပူဇော်ထားတဲ့ ရွှေအလေးချိန်က ကီလိုဂရမ် ၂၀ ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှမနှိုင်းယှဉ်သာပါဘူး။ စိန်၊ ပတ္တမြားနဲ့ တခြားကျောက်မျက်ရတနာပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်ကိုလည်း စေတီတော်ကြီးအတွင်းမှာ ဌာပနာထားပါတယ်။ စိန်တွေချည်းပဲ အလေးချိန် ၁၈၀၀ ကာရတ်ရှိပြီး စိန်ဖူးတော်က ၇၆ ကာရက်အလေးချိန်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်...
သန်းဝင်းလှိုင် ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၂ ၁၉၈၈ခုနှစ်မှစ၍ အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သော နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့တဖြစ် လဲ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် ၂၂ နှစ်အကြာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့တွင် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံ၍ ရွေး ကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားသော ဦးသိန်း စိန်ခေါင်း ဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရသစ်ထံ အာဏာလွှဲပြောင်း၍ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကို ဖျက်သိမ်းလိုက် ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ယင်းနေ့မှာပင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒုတိယသမ္မတများ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဖွဲ့ အစည်းဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၏ရှေ့ မှောက်တွင် ကတိသစ္စာပြုပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီဝင်များစာရင်းကို...
…………….. ……….. ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခြင်္သေ့နှင့် ဆင်ဖြူတော်များပုံပြင် နေသွင် ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၂ မနေ့ညတုန်းကပဲ မြို့တော်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကို ရောက်ပါတယ်။ မြို့ထဲသွားမယ့် တက္ကဆီပေါ်မှာ ကားဒရိုင်ဘာက ဘုရား တဆူဘက်ကို ညွန်ပြရင်း “အဲဒါပေါ့၊ ရွှေတိဂုံဘုရားဆိုတာဆိုပြီး ပြပါတယ်၊ မြန်မာတွေဂုဏ်ယူကြတဲ့ ရွှေရောင်ဝင်းဝင်း စေတီတော်ကြီးပေါ့။ ဘုရားရှေ့မှာတော့ အစောင့်ခြင်္သေ့ကြီးနှစ်ကောင် ရှိပါတယ်။ အမှောင်ထုထဲမှာ လင်းလင်းဝင်းဝင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားရဲ့ ဒီ ခြင်္သေ့ရုပ်ထုကြီးတွေက ဂျပန်က ရှန်တိုဗိမာန်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ ကျောက်ဂူအစောင့်ခွေးရုပ်ထုကြီးတွေထက် အဆမတန်ပိုကြီးပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ခြင်္သေ့ရော၊ ဂျပန်က အစောင့်ခွေးတွေရော၊ ရှေ့ဟောင်း အရှေ့တိုင်းအယူအဆကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ။ တောရိုင်းတိရိ စ္ဆာန်အပေါင်းရဲ့ ဘုရင်၊ ခြင်္သေ့က တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူတွေရဲ့ သင်္ကေတ၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရဲ့နိမိတ်ပုံ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအ ယူအဆကို...
…… …. …. ဗေဒင်၊ ယတြာနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအုပ်ချုပ်သောတိုင်းပြည် နေသွင် ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၂ ဗေဒင်နဲ့ကမ္ဘာကျော်တဲ့ မြန်မာပြည်ကို သွားလည်ခွင့်ကြုံရင် ဗေဒင်ဆရာတယောက်ဆီမှာ ဗေဒင်ဝင်မေးကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ရန်ကုန်က ရွှေတိဂုံဘုရားစောင်းတန်းမှာ အိမ်တန်းလေးတွေနဲ့တူတဲ့ ဗေဒင်ဟောခန်းတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီဗေဒင်ခန်းတွေထဲမှာ ဗေဒင်ဆရာတွေက ဗေဒင်မေးချင်သူတွေကို စောင့်နေပါတယ်။ အိန္ဒိယအနွယ်ဖွား အမျုိးသမီးကြီးတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ ကျနော်ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့မွေးနေ့၊ မွေးနှစ်ကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာ သူက စက္ကူစာရွက်တရွက်ပေါ်မှာ ဇာတာပုံတခု ဆွဲလိုက်ပြီး အနာဂတ်မှာ ကျနော့်အတွက် ကံကောင်းစေမယ့် အလုပ်အကိုင်၊ ကံကောင်းမယ့် အရောင်၊ ကံကောင်းမယ့် အရပ်မျက်နှာတွေကို ဟောပါတော့တယ်။ “ဒီလကုန်တဲ့အထိ အမည်းရောင်တွေမ၀တ်နဲ့နော်။ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်တတ်တယ်” သူက သတိပေးပါတယ်။ “ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့” ဆိုပြီးတော့လည်း ယတြာတွေပေးပြန်ပါတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားစောင်းတန်းမှာဝယ်ဖို့ စာရင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ပစ္စည်း အမယ်တွေကတော့...
သန်းဝင်းလှိုင် ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် သပိတ်စခန်းဖွင့်၍ ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ပေးရေးကို တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေသောလူထုအား လက် နက်ဖြင့်ဖြိုခွင်း၍ စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းပိုက်ပြီးနောက် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (နဝတ) ၏ အမိန့် အမှတ် ၁/၈၈ ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။ နဝတအဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်၊ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ညွန့်၊ အတွင်းရေးမှူး (၂) ဗိုလ် မှူးကြီးတင်ဦးနှင့် အဖွဲ့ဝင် (၁၆) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှာ နဝတသည် ပြည်သူလူထုအား စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း၊ သပိတ်စခန်းဖွင့်ခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူမျာကို နှောင့်ယှက်ခြင်းမပြုရန်နှင့် ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်သည်။ ထို့အ ပြင် အစိုးရဌာနအသီးသီးမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ...
….. ….. …. မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ကံကောင်းစေသော နံပါတ် ၉ နေသွင် ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်မှာ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ အချိန်ကာလတခုမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းငွေစက္ကူတွေကို သုံးခဲ့တာရှိပါတယ်။ ငွေအမ်းရ၊ လဲရတာ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတဲ့ ၄၅ ကျပ်တန်၊ ၉၀ တန် ငွေစက္ကူတွေပါပဲ။ ပြန်ကြည့်ရင် ၄၅ ကျပ်တန်ရော ၉၀ တန်ရော ၉ ကနေ အဆတိုးသွားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေပါပဲ။ ၉ ငါးလီ ၄၅၊ ၉ ဆယ်လီ ၉၀၊ ဒီလိုပါ။ လေ့လာသူတွေကတော့ ဒီလို ဂွကျကျ ငွေစက္ကူတွေကိုထုတ်ဖြစ်ဖို့ ဗေဒင်ဆရာတွေက နောက်ကွယ်ကနေအကြံပေးတာလို့ ဆိုကြပါတယ်၊ ဗေဒင်ဆရာတွေဟာ မြန်မာပြည်ကဗိုလ်ချုပ်တွေ တခုခုမလုပ်ခင် ရက်ကောင်းရက်မြတ်ရွေးတဲ့နေရာ၊ အရပ်မျက်နှာ ရွေးချယ်တဲ့အခါ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေရွေးတဲ့...
ဂျပန်လူမျိုး နိုင်ငံခြားသား သတင်းစာဆရာတဦးက မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ဓလေ့စရိုက်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ သဘောသဘာဝတို့ကို ခရီးသွားဆောင်းပါးများအဖြစ် ပုံဖော်ထားသည်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှသည့်အတွက် မိုးမခစာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီး ခံစားဖတ်ရှုနိုင်စေရန်အတွက် မူရင်းဘာသာပြန်သူဆီမှ ခွင့်တောင်းပြီး ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။ မိုးမခ ◊ ◊ ◊ ဂျပန်လူမျိုး သတင်းထောက် တာကာယူကီ ကာဆူဂါ (Takayuki Kasuga) သည် မနှစ်နွေရာသီက မြန်မာပြည်ကိုသွားခဲ့ပြီးနောက်၊ ဂျပန်ပြည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသော မိုင်နီချီ ရှင်ဘွန်း (Mainichi Shimbun) သတင်းစာမှာ ခရီးသွားဆောင်းပါးများ အခန်းဆက်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ သူမြင်တွေ့ခဲ့ရသော မြန်မာပြည်က နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး အပြောင်းအလဲများ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံ၊ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ဓလေ့စရိုက်များအကြောင်း ဂျပန်လူမျိုးတယောက်၏ အမြင်၊ သတင်းထောက်တယောက်၏ ရှု့ထောင့်မှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ တင်ပြထားသည်များကို...